Ihe a na - akpọsa ụgbọ mmiri a na - akpọ n’ahụ́ n’ahụ́, a na - egbochi ụlọ ọrụ na - China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Security > Ụdị:>Ụbọbọ ụgbọ n’ahụ́ n’ahụ́
Ụdị FerrueNwere akụkụ nke anụ ahụ́ yiri ya na kable a kụkọ, Ma, a na - ejikọta ihe ndị dị iche iche a na - enweghị n’ahụ́, bụ́ ndị na - ejikọta kabel n’ọkọta iji mee ka ígwè a na - akwụsị n’ahụ́ nke a na - akpọ rhombus. Ihe a a na - eme n’ụzọ dị mma na - eme mgbanwe n’ihe omume 3-D kasị ịma na usoro ihe omume dị iche iche ndị:
L Ferrule: kopa a na - anọ, ọla a na - akpọ nickel, ígwè na - adịghị egbu n’ahụ́ ma ọ bụ aluminium.
L ihe kacha: a na - enweghị ihe a na - egbu n’ahụ́ AISI 304, 304L, 316, 316L.
L ụhara Diamond: 20 mm ruo 200 mm.
L Cable diameter: mm 1 ruo 4 mm.
L Standard: ime ihe n’ebe mba nile nakwa n’iwu owuwu ụlọ mba ị na - arịọ ya.
Ụfọdụ n’ime ihe ọ bụla a na - eme n’ebe ọ nọ.
Ụbọ ụgbọ mmiri a na - enwe tupu egwú
Ụbọchị a na - akwụsị n’ahụ́ n’ahụ́
LIhe na - arọ ọkụ na ime mgbanwe dị ukwuu.Ihe ndị ahụ:
A pụrụ ịgbanwe obodo ya, ọdịdị ya, ogologo, ụgbọ mmiri na ụdị ụgbọ mmepe. Ihe ọzọkwa, ọdịdị diagonal na n'agbataghị n'agbatakwa. N’ihi ya, ọ dị mfe ịnyịnyị n’ọnọdụ ọ bụla, a na - ejikwa ya n’ọtụtụ ebe.
LIke dị ukwuu, na - eguzogide ike ọgwụgwụ na mmetụta.
Mmadụ na - ejikọta ụbụrụ e ji akpụkpọ n’akwụkwọ, na - eme ka ọkụ ahụ dị ike. N’ihi ya, a na - enweghị ike ịkpata ọgwụgwụ na mmetụta.
LObi dị mfe.
Ụbọ e wuru n’ahụ́ dị 7 × 7 ma ọ bụ 7 × 19, na - eme ka ụgbọ mmiri ferrule ferrule n’ahụ́ nke ukwuu. N’ihi ya, a pụrụ ịkpụ ya n’ụzọ dị mfe mfe, bụ́ nke na - eme ka ọ dịghị mgbalị ịkwụ ụgbọala. Ihe ndị a na - emekwa ka ọ dị mfe ịkwụnye. Karịsịa, ọ gaghị emeru aka.
LMmadụ magburu onwe ya na - emegide nzube, a na - enwe nrụ na - adịgide.
A na - esi n’ọnụ 304, 316, 304L ma ọ bụ 316L, n’ihi ya, ọ na - eme ka a ghara ịkpọ nrị. N’ihi ya, o nwere ike ịdị ndụ ruo ihe karịrị afọ 30.
LEchiche n’ụzọ dị ịrịba ama na ọdịdị dị ebube.
Ụbọbụ ụbụrụ ferrule mesh nwere oge dị iche iche na ferrules, na - eme ka ọ na - enwe echiche dị ukwuu na ọdịdị dị ukwuu. N’ihi ya, a na - eji ya eme ihe nile dị ka ndị nnụnụ, ụlọ anụmanụ, ọgba anụmanụ, ụlọ a na - eme n’ihe ndị ọzọ. Ọ bụkwa nnukwu ígwè a na - enweghị ntị.
LỊdị na - enweghị nchekwa na ebe obibi na - eme enyi.
Ọ dịghị ihe ndị a na - egbu egbu n’ahụ́ ụgbọ mmiri n’ahụ́. Ka oge na - aga na - aga, ọ gaghị egwú ma ghara ịnọ. N’ihi ya, ọ dịghị mkpa ịnọgide na - enwe ya. Ozugbo e tinyere ya, a pụrụ iji ya mee ihe ruo mgbe ebighị ebi.
Ịnyoro ụbụrụ egwu
Ụdị mpụta ụdị ụdị ụra
Ọzọrụ:Ụbọ a na - akwụ n’akwụkwọ
Mwagụ̀ stainless steel ferrule rope mesh, stainless steel ferruled rope mesh, ferrule type cable mesh,
Uru ndị dị n’iji ụgbọ mmiri a na - enweghị ntị
Bịad a na - enwe akụkụ ahịhịa a na - ahọrọ uwe a dị ala karịn, mgbe a na-azụsịrị ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa a na nke ziri ezi, a họọrọ usoro a na-ahọrọ a na-ahọrọ, A na - amụtakwa ụkpụrụ ndị Britai...
Mgbe ị na - etinye ụdị ferrule kable, lebara ihe ndị a
Mgbe ewunyereỤdị ferrule, Lebara anya n’ihe ndị na - esonụ:1. Dị ka ihe atụ a na - akpọ n’ụdị ferrule kable n’ahụ́ si kwuo, ihe ndị a na - akpọ n’ụdị ferrule kable n’akụkụ ahụ́ dị n’otu. Otú ọ dị, iji...
Ịkụ ụgbọ ígwè n’ahụ́ n’ahụ́ n’ahụ́
E nwere ọtụtụ ụdị mpịa e ji wita n’akwụkwọ n’agbụ. Ọ bụghị nanị ụdị ụgbụgba a siri ike ma na - adịgide adịgide, kamakwa, nwekwara ntachi obi jupụtara na ije ozi ogologo oge. Dị ka ihe atụ, a pụrụ iji ...